महिनावारी कपकाे बारे जान्नै पर्ने केही कुरा र प्रयाेग गर्ने तरिका – Makalukhabar.com
२०७७ श्रावण २७, मंगलवार ०९:२९
वैदेशिक रोजगारबाट पठाइएको रकमको हिसाब बुझाउन नसक्दा सम्बन्धविच्छेद
गोंगबु हत्याकाण्ड: ‘केहि दिन आउँदिन’ भन्दै महिलाको कोठामा गएका थिए…
महिनावारी कपकाे बारे जान्नै पर्ने केही कुरा र प्रयाेग गर्ने तरिका
मकालु खबर	 २०७६ भाद्र २४ गते प्रकाशित 0
भाद्र २४। धेरैलाई थाहा नै छैन की के हो महिनावारी कप । यसैले हामी यो बारे केही छोटो जानकारी दिँदैछौ ।
हाम्रो समाजमा महिनावारीबारे अहिले पनि धेरै संकुचित छ। सहरी भागमा यसलाई सामान्य शारीरिक प्रक्रिया मान्ने सकारात्मक सोच विस्तार हुँदै गए पनि गाउँघरमा यो अझै ‘पाप’ नै कहलिन्छ। छाउगोठमा महिलाहरूले ज्यान गुमाएका समाचार आइरहेकै छन्।
महिनावारी स्वच्छ बनाउन हामी स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्दै आएका छौं। अचेल ट्याम्पुन पनि बजारमा देखिन थालेको छ। ट्याम्पुन भनेको कपासलाई लाम्चो आकार दिएर बनाइएको साधन हो, जुन महिनावारी बेला महिलाको भित्री अंगको भित्र राखिन्छ। यसले रगत सोस्छ। विदेशमा यसको चलन धेरै भए पनि हामीकहाँ प्याडजस्तो सर्वसुलभ छैन।
कहिले बन्ला झमकको घर, कहिले आउलिन् काठमान्डू !
किस्ट अस्पतालमा उपचाररत ५० वर्षीय कोरोना संक्रमितको मृत्यु
खुलेको शहरमा डराएको मन !
एक महिला स्वास्थ्यकर्मीमाथि निर्घात कुटपिट
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ४ जना कोरोना संक्रमितको मृत्युः स्वास्थ्य मन्त्रालय